မောင်လူအေး ကိုယ်တိုင် စာစီစာရိုက် လုပ်တဲ့ ပထမဆုံးသော Ebook ကနေ့တော့ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာစာကို လက်တစ်ချောင်းထောက် ရိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် စာမျက်နှာ ၁၄၀ ကို စာရိုက်တာ တော်တော် စိတ်ရှည်ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြီးအောင် ရိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကြိုးစားပန်းစား ရိုက်လိုက်တာ ခုတော့ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီး သွားခဲ့ပါပြီ။ လေ့လာ ဖတ်ရှုလိုသူများ အတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာက အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါကြောင်း။ :)
Filed Under : Arakan, Download, Ebook, Language
၂၀၀၉ ခု ဇန္န၀ါရီလအတွက် ငွေကြေးတန်ဖိုး သုံးသပ်ချက်လေးပါ။ ဇန္န၀ါရီ လကုန်မှာ ရန်ကုန် ကို ပြန်သွားဖြစ်တာရယ်၊ ပြန်ရောက်တော့လည်း တိုင်ပတ်နေတာရယ်နဲ့ ခုမှ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လတွေ အချိန်မီ တင်ပေးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်။
2009 ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလအတွင်းမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 729.58 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပြီး ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက်မှာ အမြင့်ဆုံး 802 ကျပ် ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဇန္န၀ါရီလ 22 ရက်နဲ့ 23 ရက်နေ့တွေမှာ အနိမ့်ဆုံး 715 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
2009 ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလအတွင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 1.4411 ပေါက်ခဲ့ပြီး ဇန္န၀ါရီလ 30 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 1.51075 ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက်၊2ရက်၊4ရက်နေ့တွေမှာ အနိမ့်ဆုံး 1.44315 ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
Brian Scaddan, “Electrical Installation Work, Sixth Edition”
Publisher: Newnes;6edition | ISBN: 0750687339 | 2008 | PDF | 468 pages
This well-known textbook is written for all electrical trainees who want to understand not only how, but why electrical installations are designed, installed and tested in particular ways. Brian Scaddan’s approach encourages independent learning with end fo chapter self-assessment questions provided.
မောင်လူအေးတို့ အင်တာနက် ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေ ကြrားမှာ မသင်ဘဲ တတ်တဲ့ ပညာလေး တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ။ မောင်လူအေးကတော့ CCP Programming လို့ ခေါ်တယ်။ ခုဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ခင်ဗျားလည်း တတ်တယ်ဗျ။ တလောလေးကတောင် ဒီ CCP Programming ပညာရှင်တွေ ဟိုးလေးတကျော်နဲ့ ကြွက်စီ ကြွက်စီ ကြားလိုက် သေးတယ်။ မသင်ဘဲ တတ်တဲ့ ပညာ ဘာများပါလိမ့်တဲ့... Cut-Copy-Paste Programming ပါတဲ့ဗျာ။ အင်တာနက်ကြီး ပေါ်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာ လူတွေ အတော်ပျင်းသွားတယ် ပြောလို့ရမယ်။ ဘာကိုမဆို အလွယ်တကူ ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ နောက်မှာ ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့တာ။
ဆိုတော့ မောင်လူအေးတို့ နေ့စဉ်အမျှ ရေးသားနေရတဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ပေးစာများ... ဒါလည်း CCP Programming နဲ့ ရေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ် ဆိုပြီး တွေးတယ်လေ။ တွေးတဲ့ အတိုင်းလည်း ရှာဖြစ်တယ်။ ရှာတော့ တွေ့တယ်။ မောင်လူအေးတော့ နှံ့အောင် မဖတ်ရသေးဘူး။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုတာ သေချာတယ်ဗျာ။ ပေးစာတွေကို Microsoft Words ပုံစံနဲ့ ရေးသားထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် CCP Programming သမားတွေ အတွက် အံကိုက်ပဲပေါ့ဗျာ။ နော...
Filed Under : Download, Ebook, Reference
HVAC သမား သူငယ်ချင်းများ အတွက် အတော်လေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါဗျာ။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို အပိုင်း ၂၀ ခွဲထားပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲက ၇ တွဲနဲ့ စုစုပေါင်း အခန်း ၂၇ ခန်းပါဝင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အထောက်အကူ ပြုမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးရဲ့ Zip ဖိုင်လေးကို လိုချင်တယ် ဆိုရင် စာအုပ်ပုံလေးကို Click ခေါက်ပါ။ တစ်အုပ်လုံး Zip လုပ်ထားတဲ့ အတွက် File Size တော်တော်လေး ကြီးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုးနတ်ရှင်နဲ့ အဆင်ပြေသင့်မြတ်မှု နည်းတဲ့ အမိမြန်ပြည်က သူငယ်ချင်းများ အတွက်ကတော့ အခန်းတစ်ခန်းချင်း ခေါင်းစဉ်လေးတွေ Click ခေါက်ပြီး Download လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်ဗျာ။
01_ Front Matter
03_ Table of content
04_ References & Design Manuals
06_ Professional Societies and Trade Organisations
08_ Cooling Load Rules of Thumb
09_ Heating Load Rules of Thumb
10_ Infiltration Rules of Thumb
11_ Ventilation Rules of Thumb
12_ Humidification Rules of Thumb
13_ People _Occupancy Rules of Thumb
14_ Lighting Rules of Thumb
15_ Appliance Equipment Rules of Thumb
16_ Cooling Load Factor
17_ Heating Load Factor
18_ Energy Conservation and Design Conditions
19_ HVAC System Selection Creteria
20_ Air Distribution Systems
21_ Piping System
22_ Central Plant Equipment
23_ Auxiliary Equipments
24_ Equipment Schedules
25_ Equipment Manufacturer
26_ Building Construction Business Fundamentales
27_ Architectural Structural Electrical Information
28_ Coversion Factor
29_ Properties of Air and Water
30_ General Notes
Appendix A Ductwork
Appendix B Hydronic Piping systems
Appendix C Steam Piping Systems
Appendix D Pipe Materials expansion and support
Appendix E Space Requirements
Appendix F Miscellaneous
Appendix G Designer Checklist
မောင်လူအေးလည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်တာလား အရှုပ်တွေ လုပ်တာလားတော့ မသိဘူးဗျာ။ စာရေးဖို့ ဖက်ကို လှည့်ကို မလှည့်နိုင် ဖြစ်နေတာပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင် ဈာန်မ၀င်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဈာန်မ၀င်ဘူး ပြောရင် တော်တော် ကြီးကျယ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ ဈာန်က ၀င်ချိန်ကို မရတာပါ။ ရေးချင်တဲ့ စိတ်လေးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ အဝေး ရောက်နေတဲ့ အချိန်။
မောင်လူအေးတို့ ခု အလုပ်ဝင်နေရတာ စင်္ကာပူရဲ့ နာမည်ကြီး IR နှစ်ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နောင်ကို Universal Studio Singapore (USS) ဖြစ်လာမဲ့ လက်ရှိ Resorts World Sentosa လို့ ခေါ်တဲ့ Project။ တကယ်တမ်းက မောင်လူအေးတို့ ကုမ္ပဏီက ရတာ Resorts World Sentosa ရဲ့ အပိုင်း တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Universal Studio Singapore ဖြစ်လာမဲ့ အပိုင်းပေါ့။ ပြီးသွားရင်တော့ တော်တော်ဂွတ်မယ်ဗျို့။ တော်တော်ဂွတ်ဆို လက်ရှိ Universal Studio ရဲ့ Theme Park က USA Orlando မှာ တစ်ခု၊ Hollywood မှာ တစ်ခု၊ Japan မှာက တစ်ခု စုစုပေါင်း ၃ ခုရှိထားပြီးသား။ ခုလက်ရှိ Universal Studio Singapore က စတုတ္ထမြောက်ပေါ့။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ သဘာဝ တွန်းတိုက်လုပ်ကြရတာ ဓမ္မတာ ဆိုသော်ငြားလည်း ခု Project က စင်္ကာပူရဲ့ အထင်ကရ၊ နိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့ Project ဖြစ်လေတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းပြီးရက်အတွင်း ၀င်အောင် အင်မတန်မှ တွန်းအားပေး လုပ်နေတယ်။ ဆိုတော့ လုပ်ငန်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူများ အားလုံးပဲ စိတ်ဖိစီးမှုက အင်မတန်များပါတယ်။ Integrated Resorts ဆိုတဲ့ အတိုင်းလည်း တကယ်ကို နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ပြုံကျပ်ညပ်သိပ်ပြီး ဆောက်နေတာပါ။
Project ကို ပထမဆင့်၊ ဒုတိယဆင့်၊ တတိယအဆင့် ဆိုပြီး ခွဲခြားဆောက်လေတော့ အယင် ပထမဆင့်တုံးက မောင်လူအေး ဝေလေလေ လုပ်လို့ ရသေးတယ်။ ခုတော့ တကယ်ကို ဘယ်လိုမှ ပတ်ပြေးလို့ မရတော့တဲ့ အနေအထား ရောက်လာတော့ ခုမှပဲ ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့ တွေ့တာ မဟုတ်ဘဲ၊ ဒုက္ခနဲ့ ကိုလူအေးနဲ့ တွေ့တာ ဖြစ်နေတယ်။
စာမရေးဖြစ်တာကတော့နှစ်ကြောင်းကြောင့်ဗျ။ အယင်က စာရေးဖို့ အချိန်ရတယ် ဆိုတာထက် စာစီဖို့ အချိန်ရတယ်ပေါ့။ စာရေးတယ် ဆိုတာ ရေးမဲ့ အကြောင်းအရာကို ခေါင်းထဲ အယင် စီရပေ သေးတာကိုးဗျ။ အခုက စားလည်း ဒီစိတ်၊ သွားလည်း ဒီစိတ်၊ အိပ်လည်း ဒီစိတ် ဖြစ်နေလေတော့၊ ခေါင်းထဲကို တခြား အကြောင်းအရာ မ၀င်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အယင် ပန်းလှိုင်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ “တခါတလေတော့လည်း အဝေးဆုံးကို ထွက်ပြေးသွားချင်ပေမဲ့လည်း ကို့ရဲ့ စိတ်တွေ အမြဲတမ်း မင်းဆီမှာပဲ…” ဆိုသလိုပဲ…ထွက်ကို ပြေးချင်တဲ့ အထိပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူက ချည်ထားလည်း၊ မချည်ထားပါဘူး။ အယင် ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးနဲ့ တူပါတယ်။ Project လောက် ပြဿနာများတာ Project ပဲ ရှိသလောက် ခေါင်းမစားရ ခေါင်းမပူရရင်လည်း တယ်မနေနိုင်တော့ ဘာဖြစ်မဲ့ ဘာ… ဘာတောတိုးတယ် ဆိုလား…
နောက်တစ်ချက်က တလောက ကုမ္ပဏီက လွှတ်လို့ BCSS သင်တန်းတက်နေရတယ်ဗျ။ ၁၇ ရက်နေ့ကျရင် စာမေးပွဲ ဖြေရမယ်။ ဘာစာတွေ ကြည့်ပြီးပြီလည်း ဆိုတော့ ဘာစာမှကို မကြည့်ရသေးဘူး။ အချိန် ကျန်ပါသေးတယ်လေ၊ ကျန်ပါသေးတယ်လေ ဆိုပြီး ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်က ပျောက်မှာ စိုးလို့ ထိန်းထားသလား အောင့်မေ့ရတယ်။ တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဘူး။ BCSS ဆိုတဲ့ သင်တန်းက အယင်က Building Construction Safety Supervisor Course ပါ။ ခုတော့ သူလည်း ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလို့ အမည်နာမ ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ Building Construction Superiors’ Safety Course ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာကွာလည်း ဆိုတော့ ကွာပါတယ်။ အယင်က Safety Supervisor နဲ့ Management level အချို့သာ တက်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပြီး၊ အခု ပြောင်းသွားတဲ့ Regulation အရ Site Supervisor ကနေ အပေါ် Engineer၊ Project Manager ၊ Project Director ရှိရှိသမျှ အကုန်မတက် မနေရတဲ့ဗျာ။ မောင်လူအေးတို့နဲ့ တွဲလုပ်နေတဲ့ Main Con ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Safety In-charge ကတော့ BCSS မပါရင် Meeting ကို လာတက်မနေနဲ့ ဆိုပဲ။ Safety နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီး တင်းကျပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဆိုတော့ အလုပ်များပြီး တိုင်ပတ်နေတာက တော့ အဓိက ပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် ခုလို အချိန်မှာ အလုပ်များနေတာသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ သူများတွေ အလုပ်ပါးတဲ့ အချိန်၊ Retrench မိတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အလုပ်များနေခြင်းဟာ တော်သေးတယ် ဆိုရပါမယ်။ ခုနေမှာ စင်္ကာပူကို အလုပ်လာရှာမယ်ဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အလုပ်များသည်သာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အရှိဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တလောလေးက သတင်းတစ်ခု ကြားတာက စင်္ကာပူက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ စီးဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အနေနဲ့S Pass အတွက် လိုအပ်ချက်များကို မြှင့်တင်တော့မယ် ဆိုတာပါပဲ။ တခြားသော EP, PR စတဲ့ အဆင့်အတန်းတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားတွေ ရှိနေသေးပေမဲ့လို့ အလယ်အလတ်တန်းဖြစ်တဲ့ S Pass ကိုင်ဆောင်သူများဟာ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဝေစုကို အတော်လေး သက်ရောက်မှု ပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏ ဖြစ်နေတာက S Pass ကို မျက်စိကျစေတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။
ဆိုတော့ လက်ရှိ S Pass နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အများစုသော သူငယ်ချင်းများနဲ့ ထပ်မံလာရောက်ကြမဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် သတိ ပြုစရာလေးပါ။ ခု လောလောဆယ်တော့ အရှုပ်တွေ လုပ်ရင်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့ မောင်လူအေး ကြိုးစားပြီး ပို့စ်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါဦးမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း လေး ပြောရင်း လာလည်ဖတ်ရှုကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရင်း…